सर्वत्र आलोचनाले वामदेवलाई पछि हटायो, काठमाडौं ७ बाट चुनाव नलड्ने ! « Janaboli
सर्वत्र आलोचनाले वामदेवलाई पछि हटायो, काठमाडौं ७ बाट चुनाव नलड्ने !
काठमाडौं । पछिल्लो दुई दिन नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै आलोचना बामदेव गौतमको भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता गौतमले बर्दियाबाट हारेपनि फेरी संसद छिर्न काठमाडौबाट उपनिर्वाचन गराएर आउन चाहेको संकेत देखेपछि सर्वत्र आलोचना गरे । आम सर्वसाधारणले समेत खुलेरै चर्को आलोचना गरेपछि काठमाडौं ७ बाट उनी चुनाव नलड्ने भएका छन् । पार्टी सांसदलाई राजीनामा गराएर आफू उपचुनाव लड्ने योजनाको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भएपछि गौतम आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन् ।
गौतमलाई सांसद बनाउन भन्दै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरले पद छाड्न तयार रहेको पत्र सचिवालयमा बुझाएका थिए । लगतै सांसद मानन्धरले सार्वजनिक रुपमै राजीनामा दिने घोषणा गरे । तर, परामर्श नै नगरी राजीनामा दिने रामवीरको पत्र सचिवालयमा प्रस्तुत भएपछि नेताहरु आश्चर्यमा परे । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सचिवालयका बहसंख्यक नेता गौतमलाई चुनाव लडाउने पक्षमा देखिएनन् ।
चौतर्फी आलोचनापछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गौतमले बुधबार साँझ सचिवालयका नेताहरुसँग परामर्श गरे । उनले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै सम्वाद गरेका थिए । नेतृत्वबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएपछि गौतम चुनाव नलड्ने निर्णयमा पुगेका छन् । नेकपाको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी भित्रबाटै असहयोग हुने र चुनाव हारिने देखेपछि गौतम स्वयंमले काठमाडौं ७ बाट चुनाव लड्दिन भन्नु भएको छ ।’ गौतम काठमाडौं ७ मा मात्र चुनाव नलड्ने हो वा उपचुनावबाटै नआउने हो प्रष्ट भएको छैन ।
बर्दिया १ मा चुनाव हारेका गौतम त्यसपछि लगातार संसदमा आउने प्रयासमा थिए । सुरुमा उनले डोल्पाका धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन सहमत पनि गराएका थिए । तर, बुढा पछि हटेपछि गौतमले दैलेख र बाँकेतिर आँखा लगाए । तर, सबैतिर सकारात्मक वातावरण नबनेपछि काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन सहमत गराएका थिए ।